Akụkọ - Ị ma ka esi etinye ọnụ ụzọ iko enyo na -amị amị nke ọma
Ị ma ka esi etinye ọnụ ụzọ iko enyo nke ọma
Site na ihe ọhụrụ na mmepe nke ụlọ ọrụ iko, a na -etinye ngwaahịa iko n'ime ndụ anyị, chọọ n'ime ụlọ ugboro ole iji iko na -abawanye ugboro ugboro, na ọnụ ụzọ iko abụghị naanị na ụlọ ọrụ ihe owuwu ka amara dị ka a na -ejikarị. n'ime ihe ịchọ mma iko na -egosikwa uru ya pụrụ iche, nhọrọ ihe nchara anaghị ejikọ naanị ndị osisi, ihe ọzọ bụ ịhọrọ maka iko, ọnụ ụzọ iko nke na -egbu maramara na ihe na -apụ apụ ga -ewepụ ọdịdị, ọ bụghị naanị na -enye nkwa na ịdị mma, a na -ekewa ọnụ ụzọ iko n'ọtụtụ ụzọ dị iche iche, ọnụ ụzọ iko mbụ ahụ bụ otu ma ọ bụ meghee ụzọ abụọ, yana na -aga n'ihu n'ihu na ndụ ndị mmadụ, Ọchịchọ maka ngwaahịa ga -abawanye, yabụ iko na -amị amị n'ọnụ ugbu a nnukwu ịrị elu , dọtara ọtụtụ ndị ọrụ, na -enye ndị ọrụ atụmatụ dị mma karịa, ugbu a mmetụta ya ka mma, ma n'ihe gbasara ọdịdị na ọdịdị mara mma nwere ọtụtụ uru, ọtụtụ ndị ọrụ maka ịwụnye ọnụ ụzọ na -adọkpụ iko ka nwere nghọtahie, yabụ hapụ obere ka ọ kwụrụ maka mmadụ niile webatara ọtụtụ ụzọ nke ụzọ enyo enyo nke itinye:
Usoro nrụnye nke ọnụ ụzọ iko na -amị amị:
1. Ị doorụrị ọ doorụ na -amị amị n'ihi na igbe ụgbọ okporo ígwè nke mbụ wee kwụgide brik, igbe okporo ụzọ kpughere na njikọta brik adịghị mma nhazi, ruo n'iwu ụfọdụ ihe isi ike. , ogologo oge, ọ dị mfe iduga na egwu dị n'akụkụ brik ahụ gbawara agbakwunyere. Ọ bụrụ na ịnọ n'oghere dị ka ụlọ mposi kichin n'ime, igbe igbe orbit dị mfe izo unyi na unyi, lampblack na -akwakọba ntụ iji chere ịda n'elu, weta nsogbu na ịdị ọcha.
2. Akụkụ elu nke igbe igbe ụzọ mkpọda na -amị amị iji hụ na ịdị elu nke 12 cm, obosara 9 cm.Dịka igbe mkpuchi, etinyere igbe egwu n'ime egwu ahụ, enwere ike kwụsịtụrụ ụzọ na -amị amị na egwu ahụ. Taa ọtụtụ ọnụ ụzọ ma ọ bụ oghere dị n'agbata 1.95 na 2.15 mita. Ahụmịhe na -egosi na mgbe ịdị elu nke ọnụ ụzọ ahụ erughị mita 1.95, n'agbanyeghị ogologo onye ahụ, ha ga -enwe nkụda mmụọ na ahụ erughị ala. ọnụ ụzọ, ịdị elu chọrọ ka ọ dịkarịa ala 195+12 = 207 sentimita dị n'elu, nwee ohere zuru oke iji mee igbe egwu nwere ike ịtụle ịme ụzọ na -amị amị. mara mma, na ogologo oge, oghere nke ọnụ ụzọ na metope nwere ike ibu ibu.
Obosara nke ọnụ ụzọ na -amị amị bụ ọmarịcha.Ndị nha ọla edo nkịtị dị ihe dị ka 80 cm x 200 cm, na ihe owuwu a, ọnụ ụzọ ahụ kwụsiri ike. ọbụlagodi ọnọdụ dị elu, ọ ka mma idobe na mpaghara dị n'okpuru ebe a na -anaghị agbanwe agbanwe, obosara nke ọnụ ụzọ ahụ na -ebelata ma ọ bụ na -eme ọnụ ụzọ ole na ole na -amị amị karịa, na -ejigide nkwụsi ike nke ọnụ ụzọ ahụ ma jiri nchekwa.
4. Jiri nlezianya mee ihe site na ala ruo n'elu ọnụ ụzọ na -amị amị (igbe ụgbọ okporo ígwè kwụgidere) .N'ihi ntughari mgbe njupụta njupụta buru oke ibu, oge dị ogologo ụzọ na -amị amị dị mfe ịpụ n'adịghị mma, enweghị ụzọ azụ. enweghị ike imeghe, pụtakwara enweghị ike ịrụzi yana enweghị ike iji ya.
Oge nzipu: Dec-02-2020